စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 10 of 30 | Frontier Myanmar
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကာရာအိုကေလုပ်ငန်းများမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအတွက် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင် ကျပ် ၅၅ သန်းခန့် ပေးသွင်းနိုင်မည်ဟု အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တွင် ပြောကြားသည်။ “၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် (ဧပြီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေသို့ ကာရာအိုကေလုပ်ငန်း လိုင်စင်အသစ် ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်တမ်း တိုးခြင်းများမှ ဝင်ငွေအဖြစ်.
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှာဖွေသူများနှင့် အလုပ်လိုလားသူများတွက် အလုပ်ရှင်များက သင့်တော်သည့် အလုပ်သမားများအား တနေရာတည်းတွင် ရွေးချယ်ခန့်အပ်နိုင်ရေးအတွက် မွန်ပြည်နယ်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပြပွဲ ၂၀၁၈ ကို မော်လမြိုင်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်နေ့များက ကျင်းပခဲ့သည်။ Swisscontact၊ Swiss Agency for Development and.
ကျောင်းသူကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအတွက် Career Gallery ကျင်းပမည်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် လူငယ်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများထံမှ အကြံပေး လမ်းညွှန်မှုများ ရယူနိုင်မည့် Career Gallery ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု စီစဉ်သူများက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါပွဲကို မြန်မာလူငယ်များအား အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလမ်းညွှန်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်.
လာအိုက မြန်မာသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်းချမည်
လာအိုနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်ကို ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း လက်မှတ်ရေးထိုးရန် သဘောတူထားသည်ဟု ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ရေးသားထားသည်။ “လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀ ကနေ ၂၀၀ အထိ ဝယ်ယူဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက သူတို့ရဲ့ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာမှုရလဒ်တွေအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်” ဟု.